ပုံလေးတွေ မောက်တင်တာနဲ့ မီးးလုံးလေးတွေ ထပေါ်မယ် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Blog Widget ပုံလေးတွေ မောက်တင်တာနဲ့ မီးးလုံးလေးတွေ ထပေါ်မယ်
ပုံလေးတွေ မောက်တင်တာနဲ့ မီးးလုံးလေးတွေ ထပေါ်မယ်
Unknown at 8:01:00 PM Blog Widget,
လုပ်နည်းးလေးကတော့ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ....
►1- Blogger Singin ၀င်လိုက်ပါ။
►2- Dashboard ကိုသွားလိုက်ပါ။
►3- Template ကိုကလစ်ပါ..။
►4- Edit Html ကိုဝင်ပါ..
►5- Ctrl+F (သို့မဟုတ်) F3 အကူညီဖြင့် ပေးထားတဲ့ ကုဒ်ကို ရှာလိုက်ပါ။
]]></b:skin> ကုဒ်ကိုရှာပါတွေ့တာနဲ့ သူ့အပေါ်ကပ်ပြီး အောက်ကပေးထားတဲ့
မှတ်ချက် ။ ။ သည်ကုဒ်ကို လူတော်တော် များများ ရှာမတွေ့ ဖြစ်နေကြပါတယ် သည်တော့ b:skin
အဲလိုလေးဘဲ ရေးရှာ ကြည့်ပါ..သူက ကုဒ်တွေကို ခေါက်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်... စာတိုင် မျှားအနက်လေးတွေက အဲတာကလစ်ကြည့် ကုဒ်တွေ ခေါက်ထားတာ တွေ့ရပါ့မယ် ဒါကြောင့် တချို့ ကုဒ်တွေ ရှာဖွေ ခက်ခဲနေတာပါ...အိုကေနော်..
font-family: "Consolas", "Courier New", Courier, mono, serif;
margin : 15px 35px 15px 15px;
padding : 10px 10px 10px 35px;
list-style-type : none;
background : #000000 url(http://4.bp.blogspot.com/-A30WOj182hM/TxBKZ23RfyI/AAAAAAAAAcg/RZ72nzCoZ8A/s320/btsnts-show-codes1.jpg) repeat-y top left;
border : 1px solid #000000;
border-left:20px solid #ccc;
-webkit-transition:all .3s ease-in-out;-moz-transition:all .3s ease-in-out;-o-transition-duration:all .3s ease-in-out;transition:all .3s ease-in-out;-webkit-border-radius:3px;-moz-border--moz-border-radius: 23px 20px 20px 20px;border-radius: 23px 20px 20px
background : #000000 url(http://2.bp.blogspot.com/-3SspZhKtmnk/TxBKaimi1nI/AAAAAAAAAco/Rd_CzaJ42LA/s1600/btsnts-show-codes2.jpg) repeat-y top left;
border : 1px solid #000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, .3);
-moz-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, .3);
box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0, 0, 0, .3);
မိမိတို့ တက်ပလက် ဆေ့လို့ ရပါပြီ...ဒါဆို
ပို့စ်တင်ကြမယ်ပေါ့...တင်တဲ့အခါ ကုဒ်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ...အဲကုဒ်မှာ ဘဲ မိမိတို့ပေါ်စေခြင်တဲ့
မူရင်းးကို သည်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်..
အောင်အောင်(မကစ) ပိုင်ဆိုင်သော နေရာလေးများကိုလာလည်ကြပါ။
Download အဆင်မပြေရင် ပြောပါ.. အဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးပါမယ်... အဆင်ပြေရင် ကြော်ငြာလေး တစ်ချက်လောက်တော့ Click ပြီး ဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်..
ဘလော့ ဖွင့်ဖွင့်ချင်း Loading Blog ဆိုတဲ့ စတိုင်ေ...
Online မှာ သီချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရအောင်
မိမိဘလော့မှာ မိတ်ဆွေဘလော့ကာများ ထားတဲ့နည်းလမ်းလေး...
ဘလော့ရဲ့ ဆိုဒ်ဘားမှာ Exchange Myanmar Money ဆိုတာ...
ဘလော့မှာ လှပတဲ့ Social Widget လေးတွေကို CSS3 နဲ့ အ...
android firewall လေးပါ။မြန်မာနိုင်ငံကလိုင်းကIDM,AD...
ဘလော့တွေမှာ ပို့စ်တင်တာနဲ့ မိမိတို့ရေးလိုသော စာသား...
Car Mechanic Simulator 2014 v1062Full Version ...
ဘလော့မှာ HTML ကာလာကုဒ် ရယူဖို့တင်ထားမယ်ဆိုရင်
TP-Link Router Firmware ကို Upgrade လုပ်နည်း
Author Box ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးထားချင်သူများအတွက်
သင့်Blogက ပိုစ့်တွေကို Facebook တွင် Automatic ရော...
Documents To Go Premium – Free Office Suite v4.000...
S4 I9500 အတွက် Kikat 4.4.2
Viber Animated Message ပြုလုပ်နည်း
Sidebar Tex ကာလာတွေ ပြောင်းကြမလား
ချက်ဘောက်လေးကို ဘေးမှာ သိမ်းထားမယ်
Start Menu မှ Control Panel ကိုဖျောက်ထားခြင်း
လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ ဖွင့်တာနဲ့ helperblogger.com ကိ...
ဘလော့မှာ ကြော်ငြာတွေ (သို့) ဆိုဒ်တွေကို Slide Sho...
Multi-Tabbed Widget လေးနဲ့ အသုံးပြုကြမယ်
Address ဘားမှာ လိုဂိုလေးတွေထည့်မယ်
Samsung ဖုန်းများတွက်Management Tool
Secure Folders Lock(PC)
မိမိဘလော့မှာ“Email Subscription Form” လေးထည့်နည်း
ဇယားကွက်လေးနဲ့ စာလေးတွေ ရေးမယ်ဆိုရင်....
ဘလော့လင့်တွေ ထိတာနဲ့ ကြယ်ရောင်တွေ တောက်ပနေအောင်
ဘလော့မှာ Slider တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း (၅)
Blogspot တွင်စာရေးနေသူများအတွက် Android ဖုန်းတစ်လ...
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Tree Brown Menu ( အညိုရောင် )
Internet Watch Update
Halloween Pumpkin Scream Livewallpaper
ဘလော့မှာ Slider တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း (၄)
Button စတိုင်လှလှလေးတွေ သုံးမယ်ဆိုရင် ( Blogger O...
အလွယ်ကူဆုံး Add Elemic Light-Dark SkyBlue Menu ( ...
ပုံတွေကို ZOOM နဲ့ကြည့်နိုင်အောင်တင်နည်း
ဘလော့ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့ နည်းလမ်းလေး ( ရှယ်နော်)
အလန်းစား AndroidMag Blogger Template လေးဒေါင်းမယ်
Alert Message Box လေးများလုပ်နည်း
V Dayအတွက်Adminကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားသည့်ဂိမ်း
ဘလော့မှာ Slider တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း (၃)
Blog မှာ WaterEffect CSS Download Buttons ထဲ့နည်း
ဘလော့မှာ နောက်ခံပုံ ထည့်နည်း
Comment နောက်ခံပုံဒီဇိုင်းလေးပြောင်းပြီး အလှဆင်ကြမယ်
ဘလော့မှာ facebook comment ရေးနိုင်အောင်
7 Days News vol.12-no.49
ဘလော့မှာ Slider တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း (၂)
ဘလော့မှာ Auto Refresh လေးလုပ်ခိုင်းကြမယ်
ဘလော့ link ကာလာ နဲ့ font ဆိုဒ်အလွယ်ပြင်နည်း
လင့်တွေကို Rollover Button လေးနဲ့သုံးခြင်ရင်
Anomous အမည်ဖြင့် Comment ပေးမရအောင်
Hide Folders 2012 4.4.1.893
ဘလော့မှာ Error 400 တက်လာတာကို ဖြေရှင်းကြမယ်...နော်.
မိမိဘလော့မှာ Right Click ပိတ်နည်း
ဘလော့ဖွင့်တာနဲ့ ဆီးကြိုတဲ့ alert-pop-up-box လေး
html5 နဲ့ css3 ကို အသုံးပြုပြီးတော့ website ရေးနည်...
Recent Posts & Comments အရေအတွက်လေးထားမယ်
Disable ဖြစ်သွားသော Sitemap ကို Enable ပြုလုပ်ခြင်...
Shortcut Search And Replace
ဘလော့မှာ Slider တစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း (၁)
Popular Post Style ( ၄-၅ ) ပုံစံနှစ်မျိုး တင်ထား...
Simple Recent Posts Widget လေးထည့်ကြမယ်
Popular Post Simple Style လေးလို့ဆိုရမယ် လန်းပါတယ်
Popular Post စတိုင်းအလန်း ( ၃ )
Blog နှင့် RSS Feed ပြဿနာ
ဘလော့ထဲက စာတမ်းတွေကို Neon Effect သုံးနည်း
ကြက်ဥပုံစံ နှင့် အသဲပုံစံ social widgets လေးပါ
ဘလော့မှာ Social Bookmarking အလွယ်ထည့်မယ်
မောက်စ်တစ်ခု ကီးဘုတ်တစ်ခု တည်းနဲ့ ကွန်ပျူတာများစွာ...